Ogaden News Agency (ONA) – Dhulboobka ka socda Itobiya iyo qorshaha lala maagan yahay Ogadenya
Dhulboobka ka socda Itobiya iyo qorshaha lala maagan yahay Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ June 13, 2011
Waxaa caalamka aad looga hadal hayaa dhulka sida sahalka ah dadkii lahaa looga qaadayo iyadoo ay arintaasi heshiis ku yihiin shirakada waawey oo ka socda dalal Asia ah oy horgal u yihiin India, China iyo Saudi arabia oo laaluush xoog leh intay siiyaan madaxda xukuumadaha sidaa kula wareegaya lacag aad u jaban dhul beereed aad u baaxad weyn. Itobiya ayaa ugu horeysa dawladaha sida naxariis darada ah uga barakiciyay dhulkii ay daganaayeen qabiila idil oo siiyay shirkado Hindi iyo Shiina ah.
Maalqabeenka Sacuudiga ayaa iyagana aan dab yar shidaynin oo dhul beereed badan ka samaystay gobolada Oromiya iyo Canfarta. Ilo xog-ogaal ah oo ku kala sugan Sacuudiga iyo Addisababa ayaa waxay sheegayaan inay aad u danaynayaan Sacuudiga dhulka Ogadenya oo ah dhul fidsan, biya leh isla markaana ah dhul dihin. Hasa ahaatee horaa loo yidhi raasimaalku waa fulaye ( رأسمال جبان ), waxay aad uga cabsadeen dagaalada ka socda gobolka iyo amni darida ka jirta.
Dadka la socda dhaq-dhaqaaqa shirkadahan dhul boobka wada waxay aad u hadal hayaan in is-dhiibkii kooxda Ibraahim dheere ay ka dambeeyeen shirkadaha Sacuudiga iyo sirdoonkiisa, hadafka ugu dambeeyana uu ahaa in dhul beereedka Ogadenya la siiyo shirakadahaa Sacuudiga. Waxaana la wada ogsoonahay xidhiidhkii ka dhexeeyay iyo gacantii ay ku lahaayeen maalqabeenada Sacuudiga ururkii burburay ee Al-Itixaad.
Waxay sidoo kale dadka indha-indheeya xidhiidhka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Itobiya soo hadal qaadaan marwalba inay xidhiidhka 2da dal ay door fiican ka qaataan ninka hadda gacanta ku haya arimaha Amniga Qaranka Sacuudiga amiir Bandar Bin Suldaan (Safiirkii horee Sacuudiga u fadhiyay Mareykanka) iyo maalqabeenka Sh. Al-camuudi oo labaduba ay dhaleen gabdho xabashi ah.
Arimahaasoo idil markaan isu wadagayno shirka hadda ka soconaya Jigjiga ee culumada loogu yeedhay iyo kuwii ka horeeyayba lama odhan karo kama madhna inay jirto ujeedo ka fog midda loo malaynayo. Waxaana hubaal ah in aanay meesha ka madhnayn ujeedadii loo abaabulay is-dhiibkii kooxda Ajo-gudhay taasoo ay ka mid tahay in dhul beeraadka Ogadenya gacanta loo galiyo maal-qabeenka Sacuudiga. Waxyaabaha la hubo ee la doonayo inay shaabadeeyaan culumadan meesha la’isugu geeyayna waa inay yidhaahdaan nabadda hala xoojiyo oo hubka hala dhiibo oo horumarka dawladda ay wado hala taageero. Qodobadaa aan xusnay umbaa laga doonayaa in laga saxiixo culumadan wajiyada quruxsan ee gadhka waaweyn ee Sacuudiga waayadii horena mushaharka iyo Zakada ka qaadan jiray.
Waxaase hubaal ah inay ku khasaarayaan, sababtoo ah dadkii dhulka lahaa ayaa jooga oo hubaysan. Waxaa jooga CWXO oo aad u hubaysan kana dhaariyay inay siday doonaan u dhex socdaan Ogadenya ciidankii Itobiya ee lalahaa waa ciidanka ugu xooga badan Afrikada madow. Waxaa joogta Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) oo aan u ogolayn in sidii loola dhaqmay Oromada iyo Qawmiyada Koonfureed loola dhaqmo shacabka Ogadenya oo dhulkooda lagu qaato 2$/Ha amaba dhalo khamri ah sida ay sheegeen saxafiyiin madax banaan oo arimahaa soo baadhay.